Igumbi elithokomele, elinokuthula, futhi elihle langasese - I-Airbnb
Igumbi elithokomele, elinokuthula, futhi elihle langasese
Crystal Lake, Illinois, i-United States
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Olivier
Leli gumbi elihle, elizimele nelithokomele litholakala endaweni ephakathi kuya phezulu. Uzothola uMfula iFox namabhishi awo imizuzu nje ukusuka, kanye nezindawo ezimbalwa zokongiwa kwemvelo kubandakanya iMoraine Hills State Park ngaphakathi kwebanga lemizuzu. Eduze uzothola imisebenzi eminingi yokuzijabulisa efana nokuhamba ngesikebhe, ukudoba, ukugwedla isikebhe, i-kayaking, ukuntanta kwamashubhu kanye nokuqasha izikebhe. Ngaphezu kwalokho, kunezindawo zokudlela ezimbalwa nezitolo zegrosa eziseduze ukuze kube lula kuwe.
Le ndlu isendaweni eseceleni kodwa ephephile phakathi no-upper end, esatholakala eduze nezindawo eziningi ezithakazelisayo nezijabulisayo njengezindawo zokongiwa kwemvelo kanye noMfula iFox.
I-Fox River kanye nezindawo zokongiwa kwemvelo ziheha izivakashi futhi le ndawo iseduze kakhulu nazo zonke lezi. Enye intandokazi iThe Snuggery endaweni yokudlela yaseMcHenry enokubukwa okuhle komfula.
Okuhamba phambili kwami wukuqinisekisa ukuthi uzoba nokuhlala okujabulisayo, okunethezeka, nokuphephile, ngakho-ke zizwe ukhululekile ukungithumelela umyalezo noma ungishayele noma nini uma kudingeka. Kungenzeka ngingabi sekhaya ngaso sonke isikhathi, ngakho qiniseka ukuthi uyakujabulela ukuhlala kwakho. Uma ngiseduze, ngiyathanda ukuzijabulisa kodwa futhi ngiyakuhlonipha ubumfihlo nendawo.
Okuhamba phambili kwami wukuqinisekisa ukuthi uzoba nokuhlala okujabulisayo, okunethezeka, nokuphephile, ngakho-ke zizwe ukhululekile ukungithumelela umyalezo noma ungishayele noma…